Chrystalline လေးကို ကြောင်ကြီးစားမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Chrystalline လေးကို ကြောင်ကြီးစားမည်
Chrystalline လေးကို ကြောင်ကြီးစားမည်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 11, 2013 in Community & Society, Events/Fundraise |9comments
မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ ရီးရဲမက်ဒရစ်အိုးပင်း ဒဗလျူတီအေ (Premier Mandatory) အမျိုးသမီး တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် ကြောင်ကြီးသမီးလေး ရှုရှားသူ အပျိုဆင် ရှာရာပိုဗာ (ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂) နှင့် ရွာထဲရှိ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ်အား မြှောက်ထိုးပင့်ကော် အားပေးအားမြောက် ပြုလုပ်ပေးနေသူ ဝစစ်သမီး ခရစ်စတယ်လှိုင်း၏ဂျီးဒေါ် အမေရိကန်လူမဲမဂျီး ဆာရီနာဝီလျံ (ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁) တို့ယှဉ်ပြိုင် ဗိုလ်လုကြမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းပွဲအနိုင် ရရှိသူသည် ဒဗလျူတီအေ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ထိပ်ဆုံးနံပါတ်၁အား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း (သို့မဟုတ်) လွှဲပြောင်းရယူမည်လည်း ဖြစ်သဖြင့် ပိုမိုဆိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်လို့နေသည်။ ပဲ အဲ အဲ…..
ထို့ကြောင့် ၎င်းပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂဇက်ရွာ ခိုင်ဘုံးရုံးဒေါ်မှ ဦးကြောင်ကြီး (ဒူးတိုက်လျောက်ထားသူ တယားလို) သမီးလေးခရစ်စတယ်လှိုင်း (ဟိုကာဒီကာ ဖုံးဖိနေရသူ တယားခံ) တို့၏အမှုအား စီရင်ချက် ချမှတ်သည်မှာ…. ရှာရာပိုဗာဂလေးနိုင်လျင် ကြောင်ကြီးမှ ခရစ်စတယ်လှိုင်းလေးအား စားစေ… ဆာရီနာဝီလျံနိုင်လျင် ခရစ်စတယ်လှိုင်းလေးမှ ကြောင်ကြီးအား ဝါးစေ… အယူခံခွင့် မရှိ.. ဤဂါး အုပဒေကဲ့သို့ အာနာတီသော အမိန့် (မှတ်ချက် – ပြီသုလွှတ်တော် တယားအုပဒေ မိုးစိုရေးနှင့် တီညိမ်ရေးကော်မတီမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖွက်ခွင့် အလျဉ်းမရှိစေရ။)
ဒါကတော့ ခိုင်ဘုံးတယားသူဂျီးရဲ့ အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားများခင်ဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပိုရှေးအိုးပင်း ပြိုင်ပွဲမှာ ရှာရာပိုဗာက နလီကို နှစ်ပွဲပြတ် အနိုင်ရပြီးနောက် ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ခရစ်စတယ်လှိုင်းကလေး မတည်ခဲ့ပါဘူး.. ကြောင်လက်သဲစူးတယ်၊ ကြောင်မွှေးရှုမိရင် တီဘီရောဂါ ဖြစ်တယ်ဘာညာနဲ့ ရှောင်ဒီရှောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဒီတခါတော့ နိုင်မည့်ပွဲရွေး လူလည်ကျတယ် အပြောမခံရအောင် ရှာရပိုဗာထက်သာတဲ့ (အခုချိန်အထိ တွေ့သမျှပွဲတိုင်းလိုလို ဆာရီနာဝီလျံ နိုင်ထားတယ်) သူနဲ့ အလောင်းအစား ရပ်သိရွာသိ လုပ်ပါပြီ။ ဒီတခါ သူရှုံးရင်တော့ သူအဖွားလေး အီးဒုံးဂျီး မျက်နှာထောက်မည် မဟုတ်တော့ပါ။ ကယ်လျင် ဝင်ကယ်သူပါ ဆွဲစားပစ်မည်။ :528:
အပျိုဆင် ရှာရာပိုဗာ လိုချင် ဘာညာဆိုပါ
ဒီဂရီ အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ချေပြီ
မဲမဲသဲသဲ တလုံးတခဲကြီး ဆာရီနာဘက်မှ အားပေးမည်ဖြစ်ပါဂျောင်း…
ဆာရီနာကြီးနိုင်လျှင် ဦးကြောင်ကြီးအား တင်းနစ်ဘော်လုံးကဲ့သို့ အမှတ်ထား၍…
ရှာရာပိုဗာကလေးကို ရှုံးပါကလည်း စတိုင်မပျက် စိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့်…
တင်းနစ်ကွင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ အမြီးမှဆွဲပြီး ကိုင်ပေါက်စေလိုဂျောင်း…
မောင်ကျောက်စေတနာ ကြောင်ကြီးအပေါ်မှာ ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်နေပါလား။ :harr:
ခေါင်းစဉ်က ကြက်သိန်း ထ လိုက်တာဗျာ..။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် အဲဒီတင်းနစ်ကလည်းအကြိုက်ဆုံးအားကစားနည်းထဲပါတယ်.. ရှာရာပိုဗာကိုလည်းအားပေးတယ်.. သူကစားရင် အသံတိုးထားရတာချွင်းချက်.. အဲဒီကြောင်အမြီးညှပ်သံလို အားယူသံကြီးကို မခံစားနိုင်လို့ .. သေချာတာကတော့ဆရီနာနဲ့ တွေ့ ရင် နလံထူနိုင်မှာမဟုတ်.. ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့အိုလံပစ်မှာ ပွဲငယ်တစ်ပွဲလေးနိုင်ပြီး ကံကောင်းလို့ ဘဲဥကွဲတာ.. အဲဒီလိုပဲ…နဒါးကိုလည်းအားပေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ဂျိုကိုဗစ်နဲ့ များကစားရင်ကြည့်ကိုမကြည့်တော့ဘူး ရှုံးမယ်ဆိုတာသိလို့..
ကြာင်သားတော့မ၀ါးချင်..ချက်လည်းနူးမယ်မထင်.. ပိသာချိန်နဲ့ ရောင်းစားပစ်မယ်.. အောင်ကြူး အချိန်ရောစီးရဲ့ လားဟင်..
နဒါးဆိုပဲ …. ဒီရွာထဲ ကျုပ် အသိမှတ်ပြုလေးစားရမယ့်လူ တယောက် တိုးသာပ…
ခရစ်စတယ်လေး တင်းနစ်စကပ်တိုလေးနဲ့ လွှားဂနဲ လွှားဂနဲ သိပ်ကြည့်ကောင်းမှာပဲနော်… ဂလုစ်… ဦးကြောင် တင်းနစ်ဘောလုံး ကောက်တတ်တယ်… ခရစ်စတယ်လေးရိုက်တာ ဒူးလေးထောက် ခေါင်းလေးမော့ ဘောလုံးစောင့်ရင်း မျှော်ဒေါ်ယောင် မျှော်ဒေါ်ယောင် မျှော်ဒေါ်ယောင် ဘဝဂ ကျွတ်ချင်ပီ.. :528:
ကြောင်ကြီးစားမည်ဆိုပါက ဘယ်ဟာမျှမချန် ကြွပ်ကြွပ်ဝါးရန် :bar: